Baxabe endleleni abahlali kooTR | News24
Baxabe endleleni abahlali kooTR
Abantwana badlala ngothuthu emva kokuba abahlali bakoo TR bevale indlela ze batshitsha izinto.uMFANEKISO: UNATHI OBOSE
Enye yeendlela ezixakeke kakhulu kwindawo yaseKhayelitsha, iMew Way, ijike yafana nebala lezemidlalo ngeCawe ngethuba iqela labahlali bendawo yamatyotyombe yakoo TR betshisa inkunkuma ukuthintela ukuhamba kwezithuthi.
Le migushuzo ilandela isigeneko nalapho kubikwa ukuba iteksi iye yakhalala umgaqo yaya kungena kumatyotyombe amabini asecaleni kwendlela.
Ngethamsanqa akhange kubekho mntu ulimalayo, kodwa esi siganeko sivuse umnyele kubahlali nabathe bagqiba kwelokuba bavale indlela.
Ukanti iinzame zamagosa ezokhuseleko zokuthibaza lo mbhodamo ziwe phantsi njengoko le migushuzo iye yaqhuba nasekuqaleni kweveki.
Oku kuthe kwanika abantwana ithuba lokuba badlale ibhola ekhatywayo esitalatweni, logama amantombazana ebedlala iitoti abanye bedlala ugqaphu.
Umhlali ozibize ngesiduko ngenxa yokoyikisela ubomi bakhe uMaMpehle uchaze olu qhankqalazo nje ngendlela ababonakalisa ukungaxoli kwabo ziimeko abaphila phantsi kwazo.
“Eyona nto imandla sifuna izindlu. Kudala sihleli ematyotyombeni. Ubomi bethu busemngciphekweni zezi zithuthi zihla zinyuka kule ndlela,” utshilo.
U-MaMpehle uhambise wathi ziliqela izigeneko ezikumila kunje ezihlala zisenzeka kule ndawo, kwaye abantu bayalimala maxa wambi baphulukane nezinto zabo zexabiso.
U-MaMpehle, nongu mama wabantwa abathathu, uthe bonke abantwana bakhe wabazalela kule ngingqi.
“Ndifike apha ngonyaka ka 1999 ndisuka eMpuma Koloni ndisengumntwana wesikolo. Ngonyaka ka 2007 ndaqala ukuzihlalela ngeloxesha ndandisele ndinaye umntwana omnye,” ucacise watsho.
Uthe abanangxaki nokuba bangabe benikwa iziza kufakwe nje amanzi, umbane kunye nezindlu zangasese.
“Ibingezonjongo zethu ukuvala indlela siphazamise izithuthi, koko siye sanyanzeleka ngoba lelona lwimi balivayo abeSixeko saseKapa,” uthethe watsho.
Uceba ka wadi 90 uLulekwa Jali usingqinile esisehlo sokutshayiswa kweehoki, watsho esithi uye waya kwirenki yee taxi eSite C, ephelekwa ziikomiti zokuhlala, ukuya kufaka isimangalo. “Siye sabuzwa ukuba ingaba siyayazi na i-number plate yesithuthi eso senze umonakalo asasazi kuba itshayise nje yabaleka. Baye bathembisa ngokuphanda ukuzama ukufumana isithuthi eso senze umonakalo,” utshilo uJali.
Isithethi seCodeta uBesuthu Ndungane uziphikile ingxelo zokuba bekufakwe ityala malunga nesithuthi sabo.
Umphathi wesikhululo samapolisa iLingelethu West uColonel Fana Dlamini usingqinile esi siganeko. Uthe i-quantum itshayise iihoki kunye nemoto yakugqiba yabaleka. Uthe amapolisa avule ityala lokuqhuba ngokungekho semthethweni.